musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Africa ndipo Pakatangira Budiriro uye Zuva Rezvekushanya Munyika
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Eswatini Breaking News • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Trending Now
World Tourism Network pamwe neAfrican Tourism Board vabatana neUNWTO nhasi mukupemberera zuva reWorld Tourism Day.
Nyamavhuvhu 27, 2021 raive zuva rekukanganwa misiyano, matambudziko uye COVID-19.
Tourism inosanganisirwa vese uye ichabudirira kunyangwe zvirinani uye nehungwaru kana uchigadzirisa kune iyo COVID-19 nharaunda.
Zuva reWorld Tourism Day rakagadzwa pachikamu chechitatu cheUNWTO muTorremolinos, Spain musi wa17 Gunyana 1979 naNigerian anonzi IGNATIUS AMADUWA ATIGBI.
Mushakabvu Ignatius Amaduwa Atigbi, wekuNigeria, ndiye akakurudzira pfungwa yekucherechedza Gunyana 27 wegore rega rega seWorld Tourism Day, ndosaka vanhu vachimuti "Mr. Zuva Rezvekushanya Pasi Pose ”.
Nhasi uno African Tourism Board yapemberera zuva reWorld Tourism Day nenyika dzose dzeAfrica nepasi rose. Raive zuva remafaro, uye zuva rekukanganwa COVID-19
Kurudziro yekuparura Zuva reWorld Tourism Zuva rakasimudzwa naVaIgnatius Amaduwa Atigbi kuUNWTO mugore ra1979. Vaive wekutanga Director-Mukuru weNigerian Tourism Development Corporation (NTDC), yaidaidzwa kunzi Nigerian Tourist Association (NTA). sachigaro weAfrican Travel Commission (ATC).
Mu 1980, the United Nations World Tourism Sangano rakapemberera Zuva reWorld Tourism Zuva sekuchengetwa kwepasi rose munaGunyana 27. Zuva iri rakasarudzwa sezuva iri muna1970, Mitemo yeUNWTO yakagamuchirwa. Kugamuchirwa kweMitemo iyi kunoonekwa sechinhu chakakosha mukushanya kwepasirese. Chinangwa chezuva rino ndechekusimudzira kuziva nezve basa rezvekushanya mukati menzvimbo yepasi rose uye kuratidza kuti zvinokanganisa sei magariro, tsika, zvematongerwo enyika, uye hupfumi pasi rese.
Ignatius Amaduwa Atigbi muna 1979 - VaWorld Tourism Day
Akafa aine makore makumi matanhatu nemasere muna Zvita 68,, 22 uye akavigwa kumusha kwake, Koko, Delta State.
Nhasi zuva reWorld Tourism Day rakapembererwa muAfrica yose nepasi rose.
Kune vazhinji, iri raive zuva rekubva kunetsekana kwe COVID-19 uye nekukuvara kwakaita denda iri kumakambani ekushanya nekushanya pasirese.
Cuthbert Ncube, Sachigaro weAfrican Tourism akaudza eTurboNews:
“Ndanga ndichipemberera zuva reWorld Tourism Day pasi pematenga eAfrica muMountain Kingdom yeEswatini. Neni paive nemumiriri weATB Brand Mr. Sandile weSouth Africa Tourism,
Eswatini ndiyo imba nyowani yeAfrican Tourism Board.
Sachigaro weATB anofara achifarira Eswatini paWorld Tourism Day
“Chikamu chikuru che Africa chave kuvhurika kuti Vashanyi Vepasi Pose vauye kuzoongorora kusiyana kwedu maererano neChinyakare, mikana yedu mikuru yekudyara mari apo tinobvuma kukosheswa uye mupiro weHurumende mukusimudzira nekusimudzira mukugadzira mabasa.
Tinofanirwa kuve nekubatanidzwa kuzere pasirese mukuyera ivhu iro uye risina kuyerwa uye Africa nezvipo zvakasiyana siyana yakaita chinzvimbo chakakosha mukupa kune GDP yepasirese.
Nharaunda dzedu dzinofanirwa kubatsirwa kubva kumamwe mapundutso nekudaro patinenge tichipemberera zuva rino Africa inofanirwa kunge ichitarisa mukumisikidza kwakakosha kwekushanya kweDzimba neyemunharaunda sehwaro hwekumisikidzwa kweupfumi hwedu hweKushanya.
Hazvina kukwana kutakurwa mukupemberera zuva rino, nekuti vazhinji vemunharaunda medu vanogara muhurombo. "Tinofanirwa kuita nzira yakakwana kuti tinzwisise kukosha kwekushanya kunobatsira vanochengeta nhaka yedu."
eTurboNews vakagamuchira mhinduro kubva kunyika zhinji dzemu Africa, kusanganisira Angola:
Mumiriri weATB: Kuyanga Diamantino: WTD, anobva kuAngola. Isu tinotenda mukuzorora kuzere, isu tinotenda mune Ruzhinji neRusununguko Sector kuedza kwekuvaka nzvimbo yakasimba yeAfrican Tourism. Isu tinotenda muAfrica Kubudirira kuburikidza NEKUDZIDZISWA KWEZVINHU ZVINOKOSHA